प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमै किन आक्रोशित भय शेरबहादुर तामाङ? — Sanchar Kendra
प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमै किन आक्रोशित भय शेरबहादुर तामाङ?
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले दर्ता गरेको गाँजासम्बन्धि विधेयक अघि बढाउँन माग गरेका छन् । बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले विधेयक दर्ता गरेको ८ सय ९६ दिन भइसकेको भन्दै सो विधेयक अघि बढाउन माग गरे ।